Warxumo tashiilka iyo runta ku saabsan Coronavirus (COVID-19) | COVID-19 In Your Language
Markii ugu dambeysay ee la cusbooneysiiyay: 13 September 2021
Macluumaadka khaldan ee tallaalka COVID-19
MACLUMAADKHALAD AH: Tallaallada COVID-19 waa kuwo khatar ah oo saameyn ba'an ku yeeshay dadka ku qaatay dibedda.
XAQIIQ: Maamulka Agabka Daaweynta (The Therapeutic Goods Administration, TGA) ayaa ansixiyay tallaalada lagu isticmaalo Australiya. Talaalada oo dhan si fiican ayaa looga baadhaa amaanka kahor inta’aan loo ogolaan in laga isticmaalo Australiya. Tan waxaa ka mid ah taxaddar ku saabsan xogta tijaabada caafimaadka, maaddooyinka, kiimikada, soo saaridda iyo arrimo kale. Macluumaadka ku saabsan tallaallada COVID-19 waxaa laga heli karaa websaydhka TGA ee ah https://www.tga.gov.au/covid-19-vaccines
Marka lagu daro qiimeynta qeyb kasta oo tallaalada COVID-19 ah, Maamulka Agabka Daaweynta ayaa kormeera tallaalada badbaadada ka dib marka lagu bixiyo Australiya. Dowladda Australiya waxay sidoo kale si dhow ula socotaa barnaamijyada tallaalka ee dibadda, oo ay ku jiraan UK, Jarmalka iyo Norway. Wadajir, macluumaadkani wuxuu gacan ka geysan doonaa hubinta in dadka Australiyaanka ah ay helaan helitaanka tallaal badbaado leh oo wax ku ool ah oo ah COVID-19.
Haddii aad isku aragto waxyeellooyin tallaal ah, raadso caawimad xirfadle caafimaad oo u wargeli TGA (1300 134 237).
MACLUMAADKHALAD AH: Dad badan ayaa u dhiman doona waxyeelada taban ee tallaalka marka loo eego COVID-19 laftiisa.
XAQIIQ: Tallaal kasta wuxuu sababi karaa waxyeelo yar oo fudud. Waxyeellooyinka ugu waaweyn ee tallaalku waa waxoogaa xanuuna, casaata ama bararta meeshii lagaa mudey, madax xanuun ama xumad fudud iyo daal. Intooda badan kuwaas waxaa lagu daweyn karaa xanuun yareeye khafiif ah sababna uma noqnayo digniin.
Maamulka Agabka Daaweynta (The Therapeutic Goods Administration, TGA) - jaangooyaha dawooyinka Australiya - ma ansixin doono tallaal aan badbaado iyo waxtar lahayn. Mid ka mid ah waxyaabaha ay si dhow u eegaan waa waxyeelo daran.
Australiya waxay leedahay mid ka mid ah hababka ogolaanshaha ugufiican aduunka dawooyin kasta oo sababi kara waxyeelo daranna lagama aqbali doono wadankan. TGA shaqadiisu kuma joogsato ogolaansho. Waxay sidoo kale il gaar ah ku hayaan xogta ka imaaneysa dibada iyo dhaqangalinta halkan. Waxba looma dhaafin fursad.
Haddii aad isku aragtid waxyeellooyin tallaal ah, raadso caawimada xirfadle caafimaad oo u wargeli TGA (1300 134 237).
MACLUMAADKHALAD AH: Dawladdu waxay u adeegsanaysaa hergalinta tallaalka sidii si ay u daboosho si ururin / u beddesho DNA-daada.
XAQIIQ: Tallaalada ayaa lagugu mudaa jidhkaaga, waxba kama saaraan jidhkaaga mana bedelaan DNA-gaaga. Qaar ka mid ah tallaallada cusub ee COVID-19 waxay adeegsadaan qayb ka mid ah Messenger RNA (mRNA) si ay jidhkaaga u faraan inay u sameeyaan jawaab kahortaga COVID-19. MRNA waxba kuma sameyso DNA-daada.
MACLUMAADKHALAD AH: Fayrasku si dhakhso leh ayuu isu beddelaa tallaalkuna weligiis ma shaqeyn doono.
XAQIIQ: Feyrasyada oo dhan wey isbedelaan. Waa qayb caadi ah oo ka mid ah horumarkooda dabiiciga ah iyo COVID-19 ayaan ka duwanaan. Iyadoo lagu saleynayo caddeynta, tallaalada COVID-19 ayaa weli wax ku ool ka noqon doona noocyada cusub.
Waxay macnaheedu noqon kartaa inay dadku u baahan yihiin tallaal xoojin ah ama ay u baahan yihiin in mar kale la tallaalo - sida hargabka oo kale. Tallaallada hadda loo oggolaaday in lagu isticmaalo Australiya waxay muujiyeen inay si aad ah waxtar ugu leeyihiin ka hortagga cudurrada daran ee ka yimaada COVID-19.
MACLUMAADKHALAD AH: Dadka qaaday COVID-19 oo bogsaday uma baahna in la tallaalo.
XAQIIQ: Badbaadinta uu qof ka helo inu u yeesho COVID-19 qofba qofka kale ayuu ka duwan yahay. Sababtoo ah fayraskani waa cusub yahay, ma garan nayno inta uu difaaca jidhka ee dabiiciga ahi sii jiri karo. Xitaa haddii aad horey u qaaday COVID-19, weli waa inaad qadataa tallaalka COVID-19 markii aad kartid.
MACLUMAADKHALAD AH: Talaalka COVID-19 wuxuu kakoobanyahay sofweer / microchips loo isticmaalo dabagalka.
XAQIIQ: Midkoodna tallaallada COVID-19 kumajiraan sofweerro ama microchips.
Xog kale oo khaldan oo loo yaqaan 'COVID-19'
MACLUMAADKHALAD AH: Carruurtu waa 'faafiyayaal wayn' ee 'COVID-19'
XAQIIQ: In kasta oo carruurta yar yar lagu yaqaan inay yihiin ' faafiye wayn' jeermisyada iyo cayayaanka guud ahaan, sida hargabka, caddaynta hadda jirta ee COVID-19 waxay soo jeedineysaa in isku-gudbinta ilme-ilaa-ilma ee iskuullada ay tahay mid aan caadi ahayn. Wax intaa dheer, ma jiraan wax xog ah oo adduunka ah oo muujinaya in faafitaanka weyn ee fayraskan uu ku dhacay carruurta yar yar. In kasta oo ay suurtagal tahay, haddana caddayntu waxay soo jeedinaysaa in carruurtu aaney ahayn kuwa sida weyn u faafiya fayraska keena COVID-19.
MACLUMAADKHALAD AH: Australiya ma heli karto qalab iyo agab caafimaad oo ku filan (hawo-mareenada, maaskaro, xirmooyinka baadhitaanka)
XAQIIQ: Australiya aad ayey ugu guuleysatay inay fidiso qalooca garaafka, taas oo macnaheedu yahay inaan iska ilaalineyno cadaadiska ku sii kordhaya cosbitaaladayada.
Waxaan haynaa qalab ilaalin shaqsiyadeed oo badan oo laga heli karo Australiya, iyada oo inbadan oo ka mid ah lagu soo saaro Australiya lana geeyo Australiya markasta. Tusaale ahaan, keydka caafimaad ee qaranku wali sifiican ayuu u keydsan yahay wuxuuna amar ku bixiyay in kabadan nus bilyan oo waji daboole ah si loogu talagaly gaarsiinta sanadka 2021.
Guddiyada latalinta ee Dowlada Australiya, oo ay kujiraan Shabakada Cudurada faafa ee Australiya iyo Shabakada Sheybaarka Caafimaadka Dadweynaha, waxay kulmayaan si isdaba joog ah si dib loogu qiimeeyo hagida shuruudaha baadhitaanka COVID-19, si loo hubiyo in baadhitaan muhiim ah lagu sameeyo si loo taageero jawaabta caafimaadka bulshada ee COVID- 19 faafa.
MACLUMAADKHALAD AH: Cusbataalada Australiya ma awoodi doonaan inay la tacaalaan baahida sii kordheysa sababtoo ah COVID-19
XAQIIQ: Australiya aad ayey ugu guuleysatay inay fidiso qalooca garaafka, taas oo macnaheedu yahay inaan iska ilaalineyno cadaadiska ku sii kordhaya cusbitaaladayada. Australiya waxay leedahay nidaam caafimaad oo heer caalami ah oo si fiican loogu meeleeyay si loo daboolo baahida dheeraadka ah inta lagu jiro Cudurka faafa ee COVID-19 haddii loo baahdo. Tan waxaa ka mid ah awoodda sariiraha cusbitaalka, qalabka caafimaadka, sahayda, iyo shaqaalaha caafimaadka iyada oo loo marayo iskaashi u dhexeeya Dowladda Australiya, dowlad-goboleedyada iyo taritoriyada iyo waaxda caafimaadka gaarka loo leeyahay.
MACLUMAADKHALAD AH: Xiritaan labo toddobaad ah ayaa joojin doona faafitaanka COVID-19
XAQIIQ: In xayiraad la saaro labo ama seddex wiig ka dibna kor loo qaado oo aan ku noqono nolosheena caadiga ah ma joojin doonto faafitaanka COVID-19.
Inta badan dadka qaba COVID-19 waxay leeyihiin oo keliya calaamado khafiif ah maba lahaba. Halista kaliya labo toddobaad xidhiddu waxay tahay in dadka qaba astaamo aan caadi ahayn COVID-19 ay iyaga oon ogeyan ugu soo bandhigaan dadka kale fayraska markii wax walba la furo xidhitaanka ka dib.
Habka ugu fiican ee lagu caawin karo gaabinta faafitaanka COVID-19 waa in lagu dhaqmo gacmaha iyo nadaafadda neefsashada, ilaalinta kala fogaanshaha bulshada, joogitaanka guriga iyo in lagaa baadho haddii aad caafimaad darantahey, iyo xidho maaska haddii aad ku sugan tahay meel fidinta bulshada iyo kala fogeynta bulshadu aaney suurtagal aheyan.
Khubaradayada caafimaadka ayaa sii wadi doona la socodka tirada kiisaska cusub maalin kasta ee Australiya gudaheeda iyo halka gudbinta ay ka socoto. Kadib waxay sameyn doonaan talooyin ku saleysan caddeynta wixii sharciyo ama xaddidaadyo cusub ah oo u baahan in la sameeyo. Qof walba waa inuu la socdaa xannibaadaha hadda jira adoo booqanaya www.australia.gov.au.
MACLUMAADKHALAD AH: Baadhitaanka qof walba ayaa joojin doonta faafitaanka cudurka 'coronavirus'
XAQIIQ: Baadhitaanadu ma joojinayso faafitaanka fayraska.
Mid ka mid ah tiirarka aasaasiga ah ee ka hortagga iyo xakamaynta COVID-19 waa mid ku habboon waqtigiisa, la qiyaasi karo oo la ogaan karo. Tijaabada baarista cudurka waxay door muhiim ah ka ciyaartaa qeexida cudurka faafa, u wargalinta kiiska iyo maaraynta xidhiidhka, ugu dambeyntiina yareynta gudbinta fayraska.
Si kastaba ha noqotee, baadhitaanka taban ee COVID-19 macnaheedu ma’aha inaanad khatar ku jirin, ama aad khatar ugu jirto dadka kale. Waad keli kartaa baadhitaan taban COVID-19 kadib markii aad la kulantay SARS-CoV-2 (fayraska sababa COVID-19) laakiin kahor intaadan calaamadaha isku arkin. Taasi waa sababta ay muhiim u tahay in lagu dhaqmo nadaafadda wanaagsan iyo kala fogeynta bulshada, iyo in la joogo guriga marka la dareemo xanuun. Tallaabooyinkan, oo ay weheliyaan baadhitaanno la bar-tilmaameedsaday, ayaa gacan ka geysanaya ka-hortagga gudbinta COVID-19 iyo cudurrada kale ee faafa, hoos u dhigista baahida nidaamka caafimaadka Australiya.
Maareynta caafimaadka bulshada ee guuleysta ee tirooyinka kiisaska iyo dillaaca ee gobol kastaa waxay u baahan yihiin in baadhitaanka si taxaddar leh loo badhtilmaameedsado si loo dheelitiro dheelitirka saxda ah ee u dhexeeya ilaalinta xakamaynta cudurrada iyo ilaalinta joogtaynta shaybaadhka iyo awoodda goobta baadhitaanka.
Baadhitaanka baahsan ee dadka Australiyaanka ah ee aan lahayn wax calaamado ah (asymptomatic) si xoog leh ayaa loo niyadjabay. Istaraatiijiyaddan baadhitaanku ma aha mid epidemiologically ahaan u habboon ama hab kharash-yareyan ah oo lagu aqoonsado gudbinta cudurka. Dawlada Australiya waxay aqoonsan tahay inay jiri karto doorka baadhitaanka asymptomatic ee xaaladaha gaarka ah ee xakamaynta cudurada iyo ujeedooyinka kormeerka. Xaaladahan waxaa ka mid ah goobaha uu ka dillaacay, dadka halista sare ugu jira in loo gudbiyo meelaha ay ka dhacaan shilalka, dadka halista ugu weyn ugu jira soo-gaadhista, iyo kuwa ku jira goobaha gudbinta halista sare ee iyaguna u nugul cudur ba'an haddii la qaado.
Dawlada Australiya waxay sii wadaa inay ku taliso in istaraatijiyadaha baadhitaanka, oo ay ku jiraan barnaamijyada baadhitaanka goobta shaqada ee dadka aan astaamaha lahayn, la horumariyo iyadoo lala tashanayo maamulayaasha caafimaadka bulshada ee khuseeya iyo agaasimayaasha shaybaadhka. Tani waa in la hubiyo in hababkii ugu habboonaa uguna wax ku oolsan la dabaqo. Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan mowqifka Dowladda Australiya ee baadhitaanka asymptomatic baahsan, fadlan eeg Websaydhada Wasaaradda Caafimaadka.
MACLUMAADKHALAD AH: Qalabka baadhitaanka sax ma aha
XAQIIQ: Australiya gudaheeda, baadhitaanka COVID-19 aad ayey sax u yihiin. Dhammaan hababka baaritaanka ee laga isticmaalo Australiya si buuxda ayaa loo ansaxiyay. Waxay sii wadayaan inay si dhow ula socdaan Maamulka Alaabada Daaweynta (TGA) iyo iyada oo loo marayo kaqeybgalka khasabka ah ee barnaamijyada hubinta tayada ee si gaar ah loogu sameeyay SARS-CoV-2 (fayraska sababa COVID-19).
Australiya gudaheeda, shaybaadhka ku saleysan baadhitaanka silsiladda polymerase (PCR) waa baadhitaanka heerka dahabka ee loo isticmaalo in lagu baadho cudurka daran ee SARS-CoV-2 ee jirkaaga, wuxuuna u baahan yahay ururinta muunad neefsashada si loo qaado baadhitaanka. Baadhitaanka PCR waa kuwo aad u xasaasi ah waxayna ogaadaan jajabka ugu yar ee hidde-sidayaasha ah ee gaarka u ah SARS-CoV-2 ee sambalka neefsashada.
Baadhitaankasta kasta oo tijaabo ah oo ku cusub Australiya waxay u baahan tahay qiimeyn taxaddar leh oo ay sameyso TGA si loo hubiyo tayada iyo kalsoonida natiijooyinka loona suurtogeliyo bixinta sharci ahaan. Wixii macluumaad ah ee ugu dambeeyay ee baadhitaanka COVID-19 ay ku jiraan Diiwaanka Australiya ee Agabka Daaweynta, fadlan booqo websaydhka TGA ee ah: www.tga.gov.au/covid-19-test-kits-included-artg-legal-supply-australia.
MACLUMAADKHALAD AH: Coronavirus waa been abuur
XAQIIQ: COVID-19 waxaa sababa coronavirus (SARS-CoV-2), taas oo qayb ka ah qoys ballaaran oo fayrasyo wata oo u horseedi kara infekshannada neefsashada ee dadka iyo xayawaanka. Infekshannadan waxay u dhexeeyaan hargab caadi ah illaa cudur aad u daran. COVID-19 wuxuu ku faafaa dadka dhexdiisa dhibcaha iyo meelaha sumeysan.
Australiya gudaheeda, Sheybaadhka Tixraaca Cudurada faafa ee Fiktooriya (VIDRL) ee machadka Peter Doherty ee Caabuqa iyo Difaaca, wuxuu ahaa sheybaarkii ugu horeeyey ee ka baxsan Shiinaha ee go'doomiya SARS-CoV-2. VIDRL waxay la wadaagtay fayraska go'doonsan shaybaadhada kale ee Australiya, Ururka Caafimaadka Adduunka iyo dalal kale, si ay awood ugu siiso abuurida, ansaxinta iyo xaqiijinta baaritaannada lagu ogaanayo COVID-19.
Australiya nasiib ayey u leedahay inay taageerto shabakad khibrad u leh shaybaadhada dadweynaha iyo kuwa gaarka loo leeyahay oo leh karti iyo aqoonsi ku habboon oo lagu ogaan karo laguna xaqiijin karo SARS-CoV-2. Awoodda sheybaadhadan si kor loogu qaado awooda baadhitaanka ayaa muhiim u ahayd guusha Australiya ee fidinta qalooca garaafka lagana fogaado heerarka infekshinka ba'an ee lagu arkay wadamada kale. Macluumaadka ku saabsan tirada dadka qaba COVID-19 iyo tirada dadka u dhinta cudurka waxaa laga soo ururiyaa Australiya iyo adduunka oo dhan. Xogta waxaa daabaca maalin kasta Waaxda Caafimaadka Australiya.
MACLUMAADKHALAD AH: Maaskiyadu waa kuwo aan waxtar lahayn iyo / ama aan ammaan ahayn.
XAQIIQ: Wajiyad, markii loo adeegsado taxaddarrada kale sida nadaafadda wanaagsan, kala fogeynta bulshada, iyo joogitaanka guriga iyo baadhitaanka markii aanad caafimaad qabtid, waxay gacan ka geysanayaan yareynta faafitaanka COVID-19.
Sida fayrasyada neefsashada badankood, SARS-CoV-2 (fayraska sababa COVID-19) waxaa badanaa ku faafa dhibco fayras ku jiro, oo la soo saaro marka qof cudurka qaba uu hadlo, qufaco ama hindhiso. Faafitaanka wuxuu kaloo ku dhici karaa sagxadaha wasakhaysan. Maaska waxaa isticmaali kara qofka qaba infekshinka fayraska neef mareenka, oo ay ku jiraan COVID-19, oo leh astaamo ama aan lahayn astaamo, si looga ilaaliyo dadka kale iyadoo la yareynayo faafitaanka dhibcaha neefta ee cudurka qaba. Maaskayada waxaa adeegsada shaqaalaha caafimaadka iyo daryeelka si ay u difaacaan naftooda markay awoodi kari waayaan inay ka fogaadaan qofka qaba infekshinka neef mareenka, oo ay ku jiraan COVID-19.
Xidhashada maaska waa hal talaabo oo kaliya oo lagu yareynayo faafitaanka COVID-19 mana aha bedelida taxaddarrada kale. Waxaa muhiim ah in la sii wado ku dhaqanka gacmaha iyo nadaafadda neefsashada ee wanaagsan, kal fogeynta bulshada, iyo joogitaanka guriga iyo baadhitaanka markii aanad caafimaad qabin.
Ma jiraan wax caddeyn ah oo muujinaya in maaska-xirashada aaney aamin ahayn ama ay u horseedayso dhibaatooyin sida oksijiin la'aan. Bixiyeyaasha daryeelka caafimaadka ayaa xidhtay maaska waqti dheeri ah sanado badan dhibaato la'aan.
Si joogto ah u gal bogan si aad ula socodtidid wixii ku saabsan horumarka muhiimka ah ee jawaabta Dowladda Australiya ee COVID-19.
SBS sidoo kale waxay haysaa macluumaad kala duwan oo ku saabsan COVID-19 oo afkaaga ah. Waxa kale oo aad isticmaali kartaa barnaamijyada taleefanka gacanta iyo ballaadhinta biraawsarka si aad u turjunto macluumaadka dawladda. Baadh mid buuxiya baahiyahaaga.
Si aad u heshid macluumaad dheeri ah oo Af-Ingiriis ah, booqo www.australia.gov.au.
Warxumo tashiilka iyo runta ku saabsan Coronavirus (COVID-19) (pdf, 205.21 KB)
Markii ugu dambeysay ee la cusbooneysiiyay 27-09-2021